पाईले थ्रेडिंग गर्नुहुन्छ, होस गर्नुहोस! - Nepal News - Latest News from Nepal
पाईले थ्रेडिंग गर्नुहुन्छ, होस गर्नुहोस!
अहिलेको समयमा धेरै जसो नारि हरुले आफु राम्री देखिन आफ्नो आखाको माथि पट्टिको परेला लै उखेलेर मिलाउने काम (थ्रेडिंग) गर्छन। त्यसो गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहाँ नहुन सक्छ ? आज हामी तपाईलाई त्यसले गर्ने असरका बारेमा जानकारी दिन्छौँ
परेला को जरा धेरै भित्र सम्म पुगेको हुन्छ। आखा धेरै संबेदन सिल अङ्ग भएका थ्रेडिंग गर्दा आँखाको भित्र पट्टि भाको मस्तिस्क बाट आँखामा गएका सुछ्म नसा हरु चुतिनछन्। अनि आँखाले बिस्तारै काम गर्न छोड्छ फल स्वरूप टाउको दुख्ने , आखा नदेख्ने ,मस्तिस्कको नसा छुटिने हुनाले मानसिक रोग लाग्ने पनि प्रबल सम्भावना हुन्छ।
थ्रेडिंग गर्दा नसा सम्बन्धि रोग लाग्ने सम्भावना त झन् ग्यारेन्टी नै हुन्छ किनकि अति संबेदनसिल अङ्ग भएका कारणले यस्तो केहि छिन को रमाइलो अनि आफु राम्रो देखिने आसामा धेरै नेपाली नारि हरुले आफ्नो स्वास्थ्यमा खेलबाड गरिरहेका छन्।
अहिले अस्पतालहरु मा त्यस्ता कैयौं रोगि हरु उपचार का लागि आउने गरेको डाक्टरहरुले बताउने गरेका छन्। तर आँखाको सुछ्म नसाहरु नै छुट्टिने र मंसक्पेसिमा हराउने हुदा अप्रेसन गर्दा पनि असंभव छ। त्यसैले आँखाको र आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि उमेर छदा वा वैसमा राम्री देखिन परेला मिलाउने काम ज्यादै घातक र खतरनाक मानिन्छ।
यसको साथै पुरुस हरुले पनि आफ्नो दरि जुँगा उखल्ने क्रम पनि बढ्दो छ यो पनि आखाको लागि अनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ तेसैले सबैले यो क्रियाकलाप नगर्नु नै बेस हुनेछ किनकि यसको उपचार असम्भव छ ।
चौकीमा थुन्छौं भन्दै बर्दीमै बलात्कार